အဆိုပါ Revised လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများစစ်တမ်းအသုံးပြုခြင်း Battery ကိုအမျိုးသမီးများနှင့် Revised ပဋိပက္ခ Tactics ကြေးခွံ (2014) များထဲတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုအတွေ့အကြုံများဖမ်းယူ - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2014 သြဂုတ် 14 ။
Moreau ကို C1, Boucher က S, Hébert M က, Lemelin J ကို.
ရင်းနှီးသောမိတ်ဖက်လိင်အကြမ်းဖက်မှု (IPSV) ၏အကဲဖြတ်မှုသည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းပိုမိုအာရုံစိုက်လာခဲ့သည်။ သို့သော် IPSV ၏အတွေ့အကြုံများကိုမည်သည့်အတိုင်းအတာအထိအကောင်းဆုံးဖမ်းယူနိုင်မည်ကိုမသေချာမရေရာဖြစ်နေဆဲပင်။ ယခုလေ့လာမှုသည် IPSV ၏ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသောအတိုင်းအတာနှစ်ခုအားတိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း - ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောလိင်အတွေ့အကြုံများစစ်တမ်း (SES) နှင့်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောပflိပက္ခနည်းဗျူဟာအကြေး (CTS2) ကိုအဓိကထားသည်။ လေ့လာမှု၏ဒုတိယရည်ရွယ်ချက်မှာလိင်တူဆက်ဆံသူများကိုအခြားသူများနှင့်လိင်မှုကိစ္စဆက်ဆံခြင်းအတွေ့အကြုံများနှင့်ညစ်ညမ်းသောအပြုအမူများရှိနေခြင်းကိုအကဲဖြတ်ခြင်းအားဖြင့် IPSV လုပ်ဆောင်ချက်များကိုတိုးချဲ့ရန်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိနမူနာတွင်အမိုးအကာများ၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသောရိုက်နှက်ခံရသည့်အမျိုးသမီး ၁၃၈ ဦး ပါ ၀ င်သည်။ ရလဒ်များအရအမျိုးသမီး ၇၉.၇% သည် IPSV ၏အနည်းဆုံးအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို CTS138 သို့မဟုတ် SES တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ နှစ် ဦး စလုံးအတိုင်းအတာအကြားညီညွတ်မှုနှုန်းသည် 79.7% ရှိပြီးအမြင့်ဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများအတွက် concordance နှုန်းသည်။
STS ထက်ပိုမိုကျစ်လစ်သော CTS2 ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုအတိုင်းအတာသည် IPSV တွင်ဖြစ်ပွားမှု ၁၆.၇% ပိုများသည်။ ထို့အပြင်အမျိုးသမီး ၂၆.၁ ရာနှုန်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်အနည်းဆုံးအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုဖော်ပြပြီး ၉.၄% သည်အခြားသူများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုအတင်းအဓမ္မပြုခိုင်းသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်သက်ဆိုင်သောအတွေ့အကြုံများကိုတင်ပြသောအမျိုးသမီးများသည်ထိုနည်းလမ်းနှစ်ရပ်တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုခံရသူ ၁၂ ကြိမ်မှ ၂၀ ဆပိုများသည်။
ထိုသို့သောတွေ့ရှိချက်ဒီလူဦးရေအကြားတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု၏မြင့်ပျံ့နှံ့အတည်ပြုခြင်းနှင့်နှုန်းထားများအသုံးပြုတဲ့အတိုင်းအတာပေါ် မူတည်. အမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်ကိုမည်သို့ဖော်ပြသည်။ ဒီလေ့လာမှုကလည်းပိုကောင်း IPSV သူ့ဟာသူတငျပွပုံကိုနားလည်ရန်အကြမ်းဖက်ပြုမူသောအမှုကွဲပြားခြားနားအမျိုးအစားများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးများ၏ဆက်စပ်မှုအလေးပေး။